तर अश्लील यस्तो रमाइलो छ! | इनाम पुरस्कार - लिङ्ग, सेक्स र इनtern
टेलिभिजन र रेडियोमा TRF
हेल्थकेयर प्रोफेशनलका लागि प्रशिक्षण
समाचार ब्लग तर अश्लील यस्तो रमाइलो छ!
तर अश्लील यस्तो रमाइलो छ!
adminaccount888 14th अक्टोबर 2018 नयाँ समाचार
"तर अश्लील यस्तो मजाक छ!" उनको 40s मा एक सुन्दर समलैंगिक व्यक्तिले भन्यो, "म यो साथी संग यो मजा लिन सक्दिनँ।" निश्चित अश्लील मजा छ। यो प्रकृतिको नम्बर एक प्राथमिकता मोटाइ दिमागको खुशी सर्किट हिट - प्रजननको, यदि हामी आमाबाबु बन्न सक्दैनौं। यो लेख भनिन्छ "म किन पार्टनर भन्दा बढी अश्लील रमाइलो पाउन सक्छु?" तपाईको ब्रेनबाट पोर्न वेबसाइटले बताउँछ किन अश्लील प्रयोगकर्ताले मायालु सम्बन्ध विकास गर्ने को लागी वास्तविक साझेदार खोज्न र अधिक कठिनाई अनुभव गर्न सक्छन्।
छैटौं वर्षदेखि गैरी विल्सनले यो विषयवस्तुमा लेखेपछि, विज्ञानले लामो बाटोमा सारियो। साहित्यमा अब निम्न समावेश छ ...
55 अध्ययनहरूमा पोर्न प्रयोग गरी कम यौन र सम्बन्ध सन्तुष्टिमा लिङ्क गर्नुहोस्.
25 अध्ययन लिंक पोर्न प्रयोग / यौन समस्याको लागि यौन लत र कम असाधारण लिंक यौन उत्तेजनाहरु लाई। The पहिलो5अध्ययन सूचीमा प्रदर्शन गर्दछ causationको रूप मा सहभागीहरु लाई अश्लील उपयोग को सफाया र पुरानो यौन दुरुपयोग को सफाया गर्यो।
30 अध्ययनहरूमा पोर्न प्रयोगको (सहिष्णुता), बढि अश्लील, र यहां सम्म कि लक्षण लक्षणहरु संग एस्केलेशन संग संगत रिपोर्टिंग।
माथिको अध्ययनहरूको अतिरिक्त, यो पृष्ठमा 130 विशेषज्ञहरूले लेख र भिडियोहरू समावेश गर्दछ (उलोजी प्रोफेसरहरू, उियोलोजिस्टहरू, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिकहरू, यौनविज्ञापनहरू, एमडीहरू) जसले स्वीकार्य र सफलतापूर्वक पोर्न-प्रेरित ईडी र अश्लील इच्छाको यौन उत्तेजित हानि व्यवहार गरेका छन्।
अमेरिकी नौसेना डाक्टरहरूले सहकर्मीको समीक्षा पेपर - के यौन पोषण सम्बन्धी यौन दुर्व्यवहारको कारण हो? क्लिनिकल रिपोर्टहरू (2016) सँगको समीक्षा यो पोर्न-प्रेरित यौन समस्याहरूमा साहित्यको व्यापक समीक्षा हो। समीक्षाले जवान यौन समस्याहरूमा ठूलो वृद्धि प्रकट गर्ने नवीनतम डेटा प्रदान गर्दछ। कागजले अश्लील लत र यौन क्यान्सरसँग सम्बन्धित न्यूरोलॉजिकल अध्ययनहरूको पनि जाँच गर्दछ। डाक्टरले पुरुषहरु को3नैदानिक ​​रिपोर्ट प्रदान गर्दछ जसलाई पोर्न-प्रेरित यौन रोगहरु लाई विकसित गरियो।
इवार्ड फाउन्डेशन,5गुलाब स्ट्रीट, एडिनबर्ग, EH2 2PR: स्कटिश Charitable शामिल संगठन SC044948